နောက်ဆုံးရ သတင်းအတိုအထွာများ.... ~ ဒီမိုဝေယံ
ီိ သြဂုတ်လက မြင်တွေ့ရတဲ့ ကြပ်ပြေး နေပြည်တော်ရှိ ပါလီမာန် အဆောက်အဦး (AP)
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သံရုံးအားလုံး မတ်လ နောက်ဆုံးထား၍ ကြပ်ပြေး နေပြည်တော် သို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်..
ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ သံရုံးများအားလုံး နေပြည်တော်သို့ လာမည့် မတ်လ နောက်ဆုံးထား၍ ပြောင်းရွှေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရှိရပါတယ်..။ လက်ရှိပြောင်းရွှေ့ပြီးနေတဲ့ သံရုံးများထဲမှာ တရုတ်သံရုံးမှ အကြီးဆုံး။ မြေနေရာအကျယ်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာမှာ ဆောက်လုပ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်.။
တပ်ချုပ်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးမှ အနားယူတော့မည်... ဓာတ်ပုံ (AP)
ယခုလ(၂၇)ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်စတင် ခေါ်ယူတော့မှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီး အရပ်သား အစိုးရပုံစံ အသွင်ပြောင်းပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးမှ အနားယူမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ပြီး မည်သည့်ရာထူးနဲ့ ပြောင်းလဲတာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတာတော့ ကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ လာမည့် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးနေ့မှာတော့ တပ်မတော်ရဲ့ အကြီးဆုံး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်အောင်မှ ပြောင်းလဲတာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်..။
မြန်မာပြည်က ခိုးသွင်းလာတဲ့ ရွှေချောင်းတွေ အိန္ဒိယမှာ ဖမ်းမိ
ကားပေါ်မှာလိုက်လာပြီး ပရိသတ်မိုင်း မထိတဲ့ မောင်မျိုးမင်းနှင့် မင်းအုပ်စိုး.... (ဆောင်းပါးရှင် အောင်မျိုးထွန်း)
ဓာတ်ပုံ Freemyanmar VCD ကားပေါ်မှာလိုက်လာပြီး ပရိသတ်မိုင်း မထိတဲ့ မောင်မျိုးမင်းနှင့် မင်းအုပ်စိုး.... (ဆောင်းပါးရှင် အောင်မျိုးထွန်း) အခုတေ...
ယနေ့နောက်ဆုံးရ လွှတ်တော်ရှေ့မြင်ကွင်းများ ....
(၃၀)ရက်နေ့က ကြပ်ပြေး နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ န...
သမိုင်းဝင် စစ်ကိုင်းမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် ရာဇမဏိစူ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ လှုပ်ရှားမှု သတင်းများ....
The Voice ဂျာနယ်. 7-8
(ဇန္နဝါရီ ၂၉)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်းသတင်းတိုမျာ...
အမေရိကန် (DV LOTTERY)နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာလူမျိုးမျ...
ကျိုက်ထီးရိုး အမှတ်တရ (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓာတ်ပ...
ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ (အပိုင်း ၁မှ၎) (ကိုမောင်...
ဒီလို တောင်ကြောတွေထဲမှာ ထိုကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်သုတ်...
ပြည်သူ့ အချစ်တော် စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာရဲ့ ...
လောင်ပြန်ပြီ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမီးတဲ့... (သတင်း၊ ဓာတ်ပ...
ဘဘဦးတင်ဦး၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို...
အမေ့အိမ်မှ ဂုဏ်ယူစရာ ကြယ်ပွင့်လေးများ...
ယခင်ဦးပိုင် ယခုမောင်ပိုင် အကြောင်း တစေ့တစောင်း......
မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို သိစေချင်ပြီး သက်ဆိုင်သူအားလ...
ပုပ္ပားအမှတ်တရ... (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ)
ပြည်ပ ခရီးသည် အလာနည်းတာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင...
ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမမှာ ပြုလ...
အမေရိကန်နိုင်ငံ Oregon ပြည်နယ် Portland မြို့မှြ...
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ပိသုကာ ဦးသန့် (၁၀၂)မွေးနေ့..
ပြည်တွင်းပြည်ပ လူမှုကွန်ယက်များ၏ စုပေါင်းအလှူဒါနပွဲ...
ရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ် ကံ့ကော်ပညာရေး သင်တန်းကျောင်း...
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ယူအေအီးနိုင်ငံသို့ ခုတ်မောင်းနေေ...
မြန်မာ့လွှတ်တော်မှာ တက်ရောက် နားထောင်မယ့် စစ်တပ် တစ...
စစ်သူခိုးတွေ ဖြိုးကြွတဲ့အချိန်.. (ကဗျာ)
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ... (ဖြစ်ကြောင်းရယ် စုံလင် မဟာရန...
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)အတွက် ကိုဆောင်းဦးလှိုင...
ပဲခူးအမှတ်တရ .... (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ)
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစ...
တံထွေးအဆွတ်ခံနေရသော လူငယ်ထု၏နားရွက်များ (ကိုမောင်ေ...
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ.. (ခေတ်သစ် ဆီသည် ယောင်္ကျား)
The Voice ဂျာနယ်. 7-6
ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများနဲ့ စာတတ်ပေတတ် ပုဂ္ဂိ...
စစ်မှု့ထမ်းဥပဒေ နှင့် ပတ်သက်၍ ကြားရသိရ တွေ့ရသမျှ ရယ...
စာရေးဆရာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမောင်ဝဏ္ဏ ဈာပနအခမ်းအနား ...
နှောင်းတမြေ့မြေ့ပါပဲဗျာ . . . .
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ကျော်ကို အခုလွှတ်နှင့် ထောင...
ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရအာဘော် သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ လွှတ်တော်...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့် မြန်မာပြည...
ဓါတ်ခဲကို ထုတ်လုပ်ဖော်ဆောင်ပြီး ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေခဲ...
ပကာသန မဖက်ဘဲ သဘာဝအတိုင်းသွားချင်သူ ကိုဝဏ္ဏ....
ယနေ့ မနက်ပိုင်းက အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး နအဖစစ်သံရုံး...
ယနေ့ ရန်ကုန်မှာရွာတဲ့ ကြိုတင်မိုး.... (ဓာတ်ပုံ၊ သတ...
အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းခင်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာဗောဓိ စေတီတော်ဝင်းအတွင်း တပ်ချုပ်...
ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ အပိုင်း (၁,၂) (ကိုမောင်ေ...
စင်ကာပူကို အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေတဲ့ တေဇသတင်း.....
၆၃ ကြိမ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော် ဓာတ်ပုံ...
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ Sanction အကြောင်း နိဂုံးပိုင်...
The Voice ဂျာနယ်. 7-5
မိုးနဲ့မြေ ဆီနဲ့ရေ ကွာခြားချက်...
မဲဆောက်မြို့ မိတ်ဆွေကောင်း စာကြည့်တိုက်မှ ကြီးမှူး...
NTD သတင်းဋ္ဌာနမှ ထုတ် လွှင့်သွားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေ...
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ Sanction အကြောင်း (ရေးသားသူေ...
ကြံ့ဖွတ် ခေတ်လူငယ် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ပြည်သူ့ဆန္ဒအ...
မနေ့က ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးေ...
မက်ဟန်တန်နှလုံးသားရဲ့ နေရာအနှံ့မှာ အမှိုက်ထုပ်တွေ ...
အကြမ်းမဖက် အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူများမှ ဦးဆောင်၍ လွ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၏ ၂၀၁၀ ပေးဆပ်မှုများ...
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး (ဗမာ့သွေး)
အလံတစ်ခု (၂၅၀၀)ကျပ် မဝယ်မနေရတဲ့ (မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စ...
သတင်းဓာတ်ပုံ ကဏ္ဍ (Global Post)
သြစတြေးလျမှ နှစ်နှစ်တကြိမ်ကျင်းပတဲ့(၅)ကြိမ်မြောက် ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NDF ခေါင်း...
အေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းအခါသမယ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူ...
အာရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ပေါ်လစီဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သူမ...
၂၀၁၀ခုနှစ် မြန်မာပြည်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ ...
ငါးမင်းဆွေက ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက်နေ့မှာ The Voice ဂျာနယ်...
The Voice ဂျာနယ် 7-4 (Final)
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြည်သူ့ဂ...